Yintoni iWebra Scraping? Iiprogram ze-Python eziPhezulu ze-10 ze-Python - i-Semalt Expert
I-Web scraping indlela efanelekileyo yokuqokelela ulwazi kwi-intanethi. Isofthiwe yokuvuna iwebhu ifikelele kwiWebhu yeWebhu yehlabathi isebenzisa iProtokholi yokuTshintshiselwa kwe-Hypertext, iqokelela idatha kwiindawo ezahlukeneyo, iguqule ibe yifomu efundekayo. Iibhola zidlala indima ebalulekileyo ekuqoqweni kwedatha kunye nokutsalwa. Zinceda ukugcina umxholo okhutshwe kwiziko leenkcukacha ngokubanzi.
Amaphepha eWebhu akhiwe ngokusetyenziswa kweelwimi ezahlukeneyo ezifana ne-HTML kunye ne-XHTML - lacto pro. Kungenxa yoko, iinkampani ziye zaphuhlisa iindlela ezahlukeneyo ze-web scraping kwaye zithembela kwi-DOM ukuxubusha, umbono wekhompyutha kunye nokusetyenziswa kolwimi ngokwemvelo ukufanisa ukuziphatha kwabantu. Ukwaziswa kwedatha kuthathwa njengento ekhangelekileyo kunye neendlela ezinengqiqo, kodwa luncedo kumashishini, abaprogram, abangekho amakhowudi, ii-webmasters, intatheli, abathengisi be-digital kunye nabalobi abazimele.
I-17 (web) ye-web scraper i-API inceda ukukhipha ulwazi kwiindawo ezihlukeneyo. Iinkampani ezifana ne-Google ne-Amazon zibonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo ze-scraping kunye nezixhobo. Iifom zakamuva ze-web scraping zifumana izidlo zedata, i-RSS feeds, i-Twitter feeds, kunye ne-ATOM. I-JSON kunye ne-CSV zisetyenziswa njengendlela yokugcina izithuthi phakathi kwamaseva wewebhu kunye nabaxhasi. Ingqungquthela, Ukungenisa. I-Kimono Labs kunye neParseHub yizona zixhobo ezidumileyo zokucoca zewebhu . Ziza zombini kwiinguqulelo zamahhala kwaye zihlawulwe kwaye zikwazi ukufezekisa imisebenzi eninzi. Emva kokukhutshelwa kwaye kufakwe, ezi zixhobo zingakhangela amakhulu emanqaku ewebhu ngeyure.
Iipatrari ezili-10 eziphambili zeelayibrari kwi-web scraping:
I-Python yilwimi eliphezulu. Iqukethe inkqubo enamandla kunye nokuphathwa kweememori. I-Python isekela iiparadigms eziprogram ezihlukeneyo, ezinjenge-oriented-oriented, functional, procedural and imperative. Inombumbi omkhulu weelayibrari eziqhelekileyo, kodwa iilayibrari ezidumileyo zePython zichazwe ngezantsi.
Izicelo zincwadi yamathala e-Python HTTP egxininisa ekusebenzisaneni kweewebhu ezahlukeneyo. Iyakwazi ukulawula ii-cookies, ukugcina umkhondo weeseshoni ezingene ngemvume, nokuphatha iindawo ezisezantsi okanye ukuthatha ixesha elide ukuphendula. Ilayisenisi ye-Apache2 License, kunye nenjongo yezicelo zokuthumela izicelo ze-HTTP ngendlela enobubele kunye.
I-scraping isofthiwe ye-web scraping ekunceda ukukhipha ulwazi oluncedo kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo.
I-SQLAlchemy yileyibrari yedatha efanelekileyo kubacebisi nabakhi bewebhu.
Le thayibrari ye-HTML kunye ne-XML iyayinceda kuma-freelancers kunye neewebhumasters.
Isixhobo sokusebenza kunye namaxwebhu e-XML kunye ne-HTML. Inceda ukuphonononga abakhethi be-XPath kunye ne-CSS kunye nokufumana izinto ezihambelana nomnatha.
Lelayibrari yePython inceda ukufezekisa imisebenzi yokuphuhlisa umdlalo we-2D.
Yinkuthalo enamandla ye-3D kunye nenjini yendalo yemidlalo, eyaziwayo ngomsebenzisi wayo onobungane.
8. I-Nltk (i-Natural Language Toolkit)
Inceda ekusebenziseni imicu eyahlukeneyo kwaye inokuyenza imisebenzi emininzi ngexesha.
I-Nose isakhelo sokuvavanya sePython esisetyenziswe ngamakhulu eenkqubo kwihlabathi lonke.
Nge SymPy, unokwenza imisebenzi emininzi kwaye uvavanye umgangatho wewebhu yakho.